Maraykanka, 31 January 2018
Arbaco 31 January 2018
Trump oo Mar Amrey in La Eryo Robert Mueller
Warbaahitan Maraykanka ayaa warisay in madaxweyne Donald Trump uu amray inuu shaqada ka eryo Robert Mueller, oo ah ninka baaraya in Ruushku faragelin ku sameeyay doorashadii Maraykanka
Qorshaha Aqalka Cad ee Soogalootiga
Aqalka Cad ayaa xalay sii daayay warbixin uu ku faah-faahiyay qorshe u muuqda xal dhex dhexaad ah oo ay ku doonayaan in sharci dajiyaasha dalkan go'aan kaga gaaraan xal u helidda soo galootiga sharci la'aanta ku yimid Mareykanka.
Rajada iyo Walaaca Soomaalida Minneapolis iyo Ciyaarta Super Bowl
Maalinta Axadda ee Febraayo ay tahay 4 saacadda Minneapolis ay tahay 6:30 fiidnimo waxaa magaalada Minneapolis ka bilaaban doonta ciyaarta kama dambaysta ee Super Bowl.
Danjire Afey: USA Haka Laabato Go'aankii Hakinta Qaxootiga
Toddobaadkan waxay ku buuxdaa sannad markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu saxiixay amarka madaxweyne ee uu ku hakinayey qaxootiga toddoba waddan oo Muslimiinta u badan, isagoo sabab uga dhigay waajib ka saaran ilaalinta amaanka Mareykanka.
Qaxooti Dhalashada Maraykanka Helay
Xafladii dadkan lagu gudoonsiiyey dhalashada waxaa goobjoog ahaa hay’adaha u doodo xuquuqda dadka soo galootiga ah, Xeerbeegti iyo Qaadiyo kasocdo gobolka Ohio, iyo waliba ehelada iyo saxiibada dadka dhalashada la gudoonsiinayey.
Saameynta Hakinta Qaxootigii Mareykanka Imaan Jirey
Toddobaadkan waxay ku buuxda sannad markii madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, uu saxiixay amar madaxweyne kaasi oo uu si ku meel-gaar ah ugu hakinayo qaxootiga dib-u-dejinta looga samaynayo dalkan Maraykanka.
Kooxda Mueller oo J. Sessions Wareysatay
Jeff Session, xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka, iyo James Comey, oo ah agaasimihii hore ee Hay’adda FBI ayaa waxaa wareysi la yeeshay kooxda gaarka ah ee baadhaysa in Ruushku uuj faragelin ku sameeyay doorashadii Maraykanka.
Warbixin: Dadaallada Helidda Xaquuqaadka Dumarka
Haweenka ku nool Mareykanka iyo dunida daafeheeda, ayaa wali hal-gan adag ugu jira sidii ay u heli lahayeen xuquuqo aas'aasi ah oo ay sheegeen inaanay ka helin bulshooyinka ay la nool yihiin.
Shaqadii Xukuumadda Maraykanka oo Joogsatay
Qeyb ahaan shaqadii laamaha xukuumadda Maraykanka ayaa maanta oo Sabti ah joogsatay, kadib markii aqalka Senate-ku uu ku guuldareystay ansixinta miisaaniyadda xukuumadda. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa sannad-guuradda 1aad ee markii Donald Trump xilka loo dhaariyay.